यिनै हुन् हिजो किनारमा सबै समान छाडेर भेरी नदीमा हा’मफा’ल्ने युवती ! को थिए उनको मोबाइलमा १२ चोटि कल गर्ने ब्यक्ति ? (भिडियो हेर्नुहोस्) – Khabar Patrika Np
प्रकाशित मिति: आइतबार, आश्विन ०३, २०७८ समय: ११:४९:२३
काठमाडौँ । हिजो मात्रै एक अपरिचित महिलाले भेरी नदीमा हा’म फा’लिन भन्ने खबर बाहिरिएको थियो। उनि ३१ बर्षिय अमिला परियार रहेको खुल्न आएको छ उनि अझै बेपत्ता रहेकी छिन । भेरी नदीको किनारामा कपडा, मोबाइल र चेकलगायतका सामान छाडेर भेरी नदीमा हा’मफा’लेकी थिइन् भनेर जता ततै मिडियाहरुले छापे पनि तर उनका आफन्तका आनुसार उनि आधा शरीर नुहाउन भनेर गएको बताईएको छ ।
आफू मलामी गएको बेला भेरी नदी किनारबाट महिलाले हा’मफा’लेको प्रदेश सभा सांसद पदमा खड्काले बताइन् । ‘नदी किनारामा केही कागज र कपडा छन्, प्रहरी नपुग्दासम्म हामीले हेर्न मिलेन,’ उनले भनिन्, ‘तत्काल उनको खोजी र पहिचानका लागि प्रहरीचौकी सुब्बाकुनालाई खबर गरिदिएका छौं ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी निरीक्षक कनक शाहीले पनि घटनास्थलमा प्रहरी गएकाले थप विवरण केही बेरमा थाहा हुने बताए । नदीमा हाम फालेकी महिलाले नदी किनारमा केही सामान छाडेकी छन् ।